Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ummandla weGulf oPhumayo woKhenketho kunye neNtengiso yezoKhenketho ukuya kwi-Soar ngo-2028
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeKuwait Breaking • Iindaba zeLuxury • iindaba • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Umzi mveliso wokhenketho nokhenketho kumazwe e-GCC uye wabona ukukhula okukhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Ingxelo entsha ivavanya ezentengiso eziphumayo kunye neemakethi zokhenketho zaseSaudi Arabia, e-UAE, eQatar naseKuwait,
Imakethi yaseSaudi Arabia iqikelelwa ekuqokeleleni ingeniso eyi- $ 27,030.19 yezigidi ngowama-2028.
Intengiso ye-UAE eqikelelweyo yokufikelela kwi-30,484.37 yezigidi zeedola ngo-2028.
Ngokwezibalo zeshishini lokhenketho kunye nezokhenketho, ngonyaka we-2017, inkcitho yezokhenketho yamanye amazwe evela kwiGulf Cooperation Council (GCC) amazwe yayiphindaphindwe nge-6.5 ngaphezulu komndilili wehlabathi.
Kwelinye icala, ngokweenkcukacha-manani zeBhanki yeHlabathi, inkcitho yezokhenketho kwilizwe jikelele kwi ISaudi Arabia, Qatar, nase Kuwait, ngonyaka we-2019 urekhodwe ukuba ube yi-USD 16.415 yezigidigidi, i-USD 12.528 yezigidigidi, kunye ne-USD 17.131 yezigidigidi ngokulandelelana. Ngaphaya koko, le nkcitho kwi-United Arab Emirates (i-UAE) ikhule ukusuka kwi-USD 18.004 yezigidigidi kwi-2018 ukuya kwi-USD 33.372 yezigidigidi ze-2019.
Ingxelo entsha inika isishwankathelo esineenkcukacha zohambo oluphumayo lokuhamba kunye nezokhenketho eSaudi Arabia, e-UAE, eQatar naseKuwait. Ingxelo igxile kwiindlela zentengiso zamva nje, amathuba, ukukhula kwabaqhubi, kunye nezithintelo ezinxulumene nokukhula kweemarike kwisithuba se-2019-2028.
Umzi mveliso wokhenketho nokhenketho kumazwe e-GCC uye wabona ukukhula okukhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Oku kukhula ikakhulu kunganxulunyaniswa nomvuzo okhulayo wabantu kwezi zizwe, kunye nemfuno ekhulayo phakathi kwabantu abahamba ngokunxulumene namashishini, ukuzonwabisa, okanye iinjongo zonqulo kumazwe awahlukeneyo kwihlabathi jikelele.
Kwezinye izibalo ze IBhanki ye hlabathi, ingeniso yelizwe ewonke (i-GNI) kwi-capita nganye e-Saudi Arabia, e-United Arab Emirates, nase-Qatar ikhule ukusuka kwi-USD 19,990, i-USD 39,290, kunye ne-USD 56,920 ngokwahlukeneyo ngonyaka we-2017 ukuya kwi-USD 22,840, i-USD 43,470, kunye ne-USD 61,180 ngokwahlukeneyo ngonyaka Ngapha koko, e-Kuwait, oku kunyuke ukusuka kwi-USD 2019 ngo-31,400 ukuya kwi-USD 2017 ngo-36,290.
Intengiso ephumayo ye-GCC kunye nentengiso yezokhenketho iqikelelwa ukuba iyakhula nge-CAGR ebalulekileyo kwisithuba sexesha eliqikelelweyo, okt 2021 - 2028. Imarike eSaudi Arabia iqikelelwa ukuba yenze ingeniso ye-USD 27,030.19 yezigidi nge-2028, inyuka kwi-USD 15,100.83 yezigidi kwi unyaka ka-2019 ngokukhula kwi-CAGR ye-18.21% kwixesha eliqikelelweyo. Ngaphaya koko, intengiso kwi-UAE, eyafumana ixabiso le-USD 19,448.49 yezigidi kwi-2019, kulindeleke ukuba ifikelele kwi-USD 30,484.37 yezigidi nge-2028, ngokukhula kwi-CAGR ye-18.73% ngexesha lokuqikelela. Ngapha koko, intengiso ye-Qatar ephumayo kunye neimalike zokhenketho ziqikelelwa ukuba zikhule nge-CAGR ye-18.66% kwixesha eliqikelelweyo kunye nokufumana ingeniso ye-USD 3989.34 yezigidi nge-2021. ye-USD 17,392.50 yezigidi ngo-2028, ngokukhula kwi-CAGR ye-18.40% kwixesha eliqikelelweyo.